यौन जिज्ञासा – PostKathmandu
Saturday, March 24Nepal No.1 News Portal
Mar222018 by PostKathmanduNo Comments
सपनामा यौनसम्पर्क गरेको किन देखिन्छ, कारण यस्तो छ / के हुन्छ पुरा हेर्नुस
सपनामा यौनसम्पर्क गरेको किन देखिन्छ, कारण यस्तो छ / के हुन्छ पुरा हेर्नुस यो पनि पद्नुहोस महादेव मन्दिर नुवाकोट जिल्ला को राउतबेसी गाविसमा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । विशेषगरी जोडी जुराउन र सन्तान माग्नकै लागी यस स्थानमा भक्तजनहरु दुप्चेश्वर महादेव पुग्ने गर्दछन् । सदरमुकाम विदुरदेखि पूर्वमा रहेको राउतवेंशी गाविसको दुप्चेश्वर महादेवको मन्दिरमा यस्तो आस्था बोकेर जाने भक्तजनको आकर्षणले पछिल्लो समयमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वलाई उजागर समेत गरिरहेको छ । हरेक वर्षको पुस महिनामा धान्यपूर्णिमाका अवसरमा साताव्यापी विषेश मेला, शिवरात्री, साउन महिना तथा हरेक सोमबार दुप्चेश्वर मन्दिरमा मेला लाग्ने गर्दछ । यहाँ मुख्यतः सन्तान नहुने दम्पतिहरु सन्तान माग्न आउने र महादेवको भक्तिपछि दैवी शक्तिले सन्तान प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । धान्यपूर्णिमादेखि एकसाता लाग्ने मेलालाई परम्परादेखि चल्
Mar212018 by PostKathmanduNo Comments
करिब ३ घण्टा यौन आनन्द दिन्छा प्याजले, कसरी प्रयोग गर्ने? जानी राखौ!<
करिब ३ घण्टा यौन आनन्द दिन्छा प्याजले, कसरी प्रयोग गर्ने? जानी राखौ!< एजेन्सी– प्याजको सेवन गर्न तपाई कति रुचाउनु हुन्छ ? वा सेवनमा धेरै भएको त छैन् ? वा त्यसको बास्ना मन पर्दैन ? वा सेवन गर्न उचित मान्नु हुन्न ? तर प्याजका धेरै उपयुक्तता मध्य एक हो यौन क्षेत्रमा बृद्धि । प्याजले केवल खानालाई मात्र स्वादयुक्त बनाउँदैन प्याजको भोजन अपच तथा खाना नरुच्ने जस्ता समस्याको समाधानमा पनि कामयावी हुन्छ । आहार विशेषज्ञ तथा यौन रोग विशेषज्ञहरुका अनुसार प्याजको सेवनले खानामा रुची त बढाउँछ नै साथै यसले यौनिक कमजोरी हटाउन पनि सहयोग गर्छ । शुखी तथा सन्तुष्ट वैवाहिक जिवनका लागि शंम्भोग शक्ति प्रवल हुन आवश्यक हुन्छ र यसका लागि प्याज एक अचूक उपाय बन्न सक्ने बताइएको छ । विशेषज्ञहरुका अनुसार यौन शक्तिको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि प्याज एक सस्तो तथा सुलभ विकल्प हो । प्याजका फाइदा यस्ता छन् १.सेता प्याज
Mar202018 by PostKathmanduNo Comments
सेक्स पावर बढाउने भियग्रा कस्तो औषधि ? यसको सेवनले कुनै हानीहुन्छ कि हुँदैन ?
एजेन्सी । दुर्बलता कम गर्ने भियग्रा भनेको कस्तो खालको औषधि हो ? यसले कसरी यौन दुर्बलता कम गर्छ ? यसको सेवनले कुनै हानि हुन्छ कि हुँदैन ? -औषधि विज्ञानका विभिन्न आविष्कारमध्ये यो पनि लोकप्रिय आविष्कारमा पर्छ । भियग्राले यौन दुर्बलताका कारण चिन्तित एवं हीनताबोधले पीडित व्यक्तिलाई पुरुषत्व फर्काउन मद्दत गर्छ । नेपालजस्तो खुल्लापन नआइसकेको समाजमा यौनबारे छलफल गर्न गाह्रो छ । वीर्य स्खलनको कार्य चरणबद्ध रूपमा हुन्छ । यसका लागि यौनेच्छा जाग्नुपर्यो, यौनांग उत्तेजित हुनुपर्यो । अनि मात्र उत्तेजित लिंगबाट स्खलन सम्भव हुन्छ । त्यसो त सामान्य पुरुषको निद्रावस्थामै पनि चारदेखि आठ पटकसम्म आफसे आफ यौनांग उत्तेजित हुन्छ । र, कहिलेकाहीँ कसैसँग संसर्ग गरेको सपनाले निद्रामा नै स्खलन पनि हुन्छ । यौनांगमा हुने रक्तप्रवाहले यसलाई उत्तेजित अवस्थामा राखिराख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । पुरुष य
म १७ वर्षीया युवती हुँ, यौन चाहना तीव्र हुँदा कुनै पुरुषसँग यौनसम्पर्क राखूँ कि जस्तो पनि लाग्छ…
म १७ वर्षीया युवती हुँ, यौन चाहना तीव्र हुँदा कुनै पुरुषसँग यौनसम्पर्क राखूँ कि जस्तो पनि लाग्छ… म १७ वर्षीया युवती हुँ । मलाई सेक्स गर्न मन लाग्छ । यौन चाहना तीव्र हुँदा कुनै पुरुषसँग यौनसम्पर्क राखूँ कि जस्तो पनि लाग्छ । तर, मैले त्यसो नगरी आफ्नै औँला योनिमा खेलाएर यौन सन्तुष्टि लिइरहेको छु । योबाहेक महिलाले कसरी हस्तमैथुन गर्छन् ? यस्तो गर्दा केही हानि गर्छ कि गर्दैन ? के हस्तमैथुन गर्दा योनि खुकुलो हुन्छ ? – एन महिलाहरूले पनि आफ्नो यौन सन्तुष्टि पूरा गर्न हस्तमैथुनको सहारा लिएका हुन्छन् । यौन चाहना पूरा गर्न महिला तथा पुरुषले यौन साथी नभएको अवस्थामा आफ्नै हातको प्रयोगले यौन चाहना पूरा गर्नु नै हस्तमैथुन हो । यौन साथी नभएको अवस्थामा मानिसले आफ्ना यौनांगलाई आफैँ घर्षण गराएर आनन्द लिने गर्छन् । योनि मांसपेशीले बनेको नली आकारको एक विशेष अंग हो र यस अंगमा निकै नै तन्कन र खुम्चन सक्ने
सेक्स गर्दा १ मिनेट पनि टिक्न सक्नुहुन्न भने अपनाउनुहोस घरेलु उपाय, , प्याजको प्रयोगले हुनेछ हप्ता दिन मै समस्याको समाधान
Warning: printf(): Too few arguments in /hermes/bosnaweb08a/b2083/ipg.offlinenepalcom/wp_postkathmandu/wp-content/themes/viral/inc/template-tags.php on line 113
सेक्स गर्दा १ मिनेट पनि टिक्न सक्नुहुन्न भने अपनाउनुहोस घरेलु उपाय, , प्याजको प्रयोगले हुनेछ हप्ता दिन मै समस्याको समाधान सेक्स गर्दा १ मिनेट पनि टिक्न सक्नुहुन्न भने अपनाउनुहोस घरेलु उपाय, , प्याजको प्रयोगले हुनेछ हप्ता दिन मै समस्याको समाधान सेक्स गर्दा १ मिनेट पनि टिक्न सक्नुहुन्न भने अपनाउनुहोस घरेलु उपाय, , प्याजको प्रयोगले हुनेछ हप्ता दिन मै समस्याको समाधान कतिपय मानिसहरु आफ्नो बैवाहिक जीवन खुसियाली बनाउनको लागि बजारमा पाइने अनेक किसिमका सेक्स सम्बन्धि औषधिहरु प्रयोग गर्ने गर्छन। यस्ता औषधिहरुले शरीरलाई नोक्सान पुर्यारहेका हुन्छन। यदि तपाईं योन क्रियाकलापमा आफुलाई कमजोर महशुस गर्नुभएको छ भने यो घरेलु उपाय अपनाउनुभयो भने तपाईंको समस्या हटेर जानेछ। आयुर्वेदमा प्याजका कयौं फाइदाहरु बताइएको छ । प्याजले खानालाई स्वादिष्ट बनाउने मात्रै हैन की पुरुषका अनेकन स्वास्थ्य सम्बन्धि सम
कुनकुन विरामीलाई सेक्सले फाइदा गर्छ !! महत्वपूर्ण कुरा आज थाहा पाउनु होस
मानिसहरु यौन सम्पर्क केवल आनन्द लिनका लागि गरिने ठान्छन् । तर नियमित यौन सम्पर्क गर्दा विभिन्न रोगबाट मुक्ति वा फाइदा हुने देखाएको छ ।नियमित सेक्स गर्दा के के फाइदा हुन्छः ♦टाउको दुख्नेःनेशनल सर्वे अफ सेक्सुअल एटीट्युड्स एण्ड लाइफस्टाइलले गरेको सोधले माइग्रेन भन्ने टाउको दुख्ने रोगका विरामीलाई नियमित सेक्स फाइदाजनक हुने देखाएको छ । सोधले महिनामा ५ पटक भन्दा कम सेक्स गर्नेहरुलाई माइग्रेन हुने नयाँ तथ्य पनि बाहिर ल्याएको छ । ♦ब्लड प्रेशरः उच्च रक्तचापका विरामीलाई पनि नियमित सेक्स फाइदाजनक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नियमित सेक्स गर्दा उच्च रक्तचाप नियन्त्रण हुने शोधको दावी छ ।प्रोस्टेट क्यान्सरःनियमित सेक्स गर्ने पुरुषलाई प्रोस्टेट क्यान्सरको खतरा निक्कै कम हुने दावी शोधकर्ताहरुले गरेका छन् । महिनामा २१ पटक वा नियमित सेक्स गर्दा प्रोस्टेट क्यान्सरको खासै खतरा नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
Mar152018 by PostKathmanduNo Comments
मिन्स भएको कति दिन पछि बच्चा बस्छ ? जानी राखौ
पुरुषबाट निस्कने शुक्रकीट र स्त्रीमा विकसित भएका डिम्बको मिलनबाट हुन्छ। यौनसम्पर्कका बेला पुरुषको वीर्यस्लखलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीट मध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बबाहिनी नलीसम्म पुग्छन्। त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्ब -(अण्डा) सँग असंख्य शुक्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ। यसरी मिलन हुने प्रक्रियालाई निषेचन भनिन्छ। यसरी शुक्रकीट र डिम्बको मिलन भएको कोषलाई युग्मज भनिन्छ र यही नै पछि विकसित भएर शिशु वा बच्चा बन्छ। सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गर्भधारण हुनका लागि मुख्य रूपमा निम्न कुराहरू हुनुपर्छ ः १. डिम्ब निष्कासन, २. यौ नसम्पर्क, ३. वीर्य स्खलन, ४. डिम्ब निषेचन तथा ५. डिम्बरोपण। एउटा महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने कुरा के भने डिम्ब निस्किएको यस्तै १४ दिनमा महिनावारी सुरु हुन्छ। यस्तै २८ दिनको महिनावारी भएको महिलाको १४ औं दिनतिर डिम्ब निस्कने भएकाले यस
Mar112018 by PostKathmanduNo Comments
मिन्स भएको कति दिन पछि बच्चा बस्छ ? जानीराखौ !
मिन्स भएको कति दिन पछि बच्चा बस्छ ? जानीराखौ ! पाठेघरमा बच्चा बस्न वा गर्भरहन थुप्रै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ। सन्तानको उत्पत्ति प्रमुख रूपमा पुरुषबाट निस्कने शुक्रकीट र स्त्रीमा विकसित भएका डिम्बको मिलनबाट हुन्छ। यौनसम्पर्कका बेला पुरुषको वीर्यस्लखलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीट मध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बबाहिनी नलीसम्म पुग्छन्। त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्ब – (अण्डा) सँग असंख्य शुक्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ। यसरी मिलन हुने प्रक्रियालाई निषेचन भनिन्छ। यसरी शुक्रकीट र डिम्बको मिलन भएको कोषलाई युग्मज भनिन्छ र यही नै पछि विकसित भएर शिशु वा बच्चा बन्छ। सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गर्भधारण हुनका लागि मुख्य रूपमा निम्न कुराहरू हुनुपर्छ : १. डिम्ब निष्कासन, २. यौ नसम्पर्क, ३. वीर्य स्खलन, ४. डिम्ब निषेचन तथा ५. डिम्बरोपण। एउटा महत्त्वपूर्ण बुझ्नुप
Mar82018 by PostKathmanduNo Comments
महिलाहरूले उठेरै पिसाब गर्न मिल्ने, अायाे नयाँ प्रविधि
यौन जिज्ञासा, रोचक समाचार
महिलाहरुका लागि सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग साँच्चीकै कष्टकर हुन्छ । सार्वजनिक शौचालय फोहोर हुने हुनाले बसेर पिसाब फेर्नुपर्ने महिलाका लागि संक्रमण तथा जिउमा फोहोर लाग्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले धेरै महिलाहरु सार्वज्निक शौचालयमा पिसाब नगरी पिसाब रोकेरै बस्न जाती मान्छन् ।काठमाडौं डेली महिलाहरुको यो समस्यालाई ध्यानमा राख्दै अष्ट्रेलियाको ग्रिन पार्टीले महिलाहरुलाई उठेर पिसाब फेर्ने तालीम दिँदैछ । समाचार अनुसार एउटा विशेष खालको सामानको सहयोगले महिलाहरुले उठेरै पिसाब फेर्न सक्दछन् । सोही विशेष किट कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने तालीम ग्रिन पार्टीले दिइरहेको छ । यो सामान नली आकारको हुन्छ । जसलाई महिलाहरुले आफ्नो मुत्रांगमा राखेर पिसाब फेर्न सक्दछन् । यसरी फेरेको पिसाब उक्त नली हुँदै ट्वाइलेट सम्म पुग्दछ ।काठमाडौं डेली प्रयोग गरिसकेपछि यो नलीलाई फ्याँक्न सकिन्छ । यो नलीको प्रयोगपछि महिलाहरुलाई फोहोर
Mar72018 by PostKathmanduNo Comments
कुन समयमा सेक्स गर्दा गर्भ रहदैन ? थाहा पाई राखौ !!!!!!!!!!!
गर्भ रहन धेरै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ । कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एक मात्र यौनसम्पर्कमा नै गर्भ रहन्छ, तर सधै यस्तो हुँदैन । यौनसम्पर्क का बेला पुरुषको वीर्यस्लखलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीटमध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बबाहिनी नलीमा पुग्छन् । त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्ब अण्डासँग असंख्य शुक्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ । सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गर्भधारण हुन मुख्य रुपमा १.डिम्ब निष्कासन, २.यौनसम्पर्क, ३. वीर्य स्खलन, ४. डिम्ब निषेचन तथा ५. डिम्बरोपणजस्ता कुरा हुनु आवश्यक छ । तपाईंलाई थाहै होला, महिलाको डिम्ब महिनाको एकपटक मात्र निष्कासन हुन्छ । डिम्ब निष्कासन हुने समय नजिक गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ । शुक्रकीटसँग मिलन हुन डिम्ब निस्किएको हुनु आवश्यक छ । बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के भने डिम्ब निस्किएको यस्तै १४ दिनमा महिनावारी सुरु हुन्छ । यस्तै
गाई काटेर खादा हिन्दुलाई आपत्ति किन ? कहिले देखि गाई नेपाली हिन्दुहरुको माता भयो – जीवन मंगोल
March 24, 2018 by PostKathmandu
न्युटन र डार्विनको चिहानसँगै गाडिने भयो स्टीफन हकिङको पार्थिक शरिर
March 23, 2018 by PostKathmandu
कोरीयाको ६ बर्षको कमाई सहित श्रीमती बेपत्ता , भेट्नेलाई १ लाख पुरस्कार
छ वर्षको कलिलो नानीलार्इ निलडाम हुनेगरी कुट्ने शिक्षक प्रहरी हिरासतमा
विदेशबाट फर्किएको श्रीमानले जब आफ्नो श्रीमती नासोचेको अवस्थामा भेटेपछि गरे यस्तो हालत
Copyright © All Rights Reserved PostKathmandu | Development Design By Lost Diamond